Sebenzisa ezona Zakhelo zibalaseleyo kwi-Instagram Ngezi Ngcebiso Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Sebenzisa izakhelo ezilungileyo kwi-Instagram ngezi ngcebiso
NgoJanuwari 27, 2019 0 IiCententarios 1350
I-Instagram yinethiwekhi yentlalo ukuba uhlala ufuna ukupapashwa rhoqo, Oko kunye nomxholo olungileyo okuvumela ukuba utsale abalandeli abaninzi kwiakhawunti yakho, ngale ndlela unokubona kwangaphambili kwaye waziwa ngakumbi eqongeni.
En nganye yeefoto kwaye iividiyo ziya kuhlala zilungile ukuze zikwazi ukuyiphatha kakuhle, okwangoku i-Instagram ikuvumela ukuba ubeke iifilitha ezahlukeneyo ukunika uthinte iifoto zakho, nangona kunjalo ayinazo iintlobo ezahlukeneyo zezakhelo ezenza ukuba zibonakale.
Kungenxa yeso sizathu sokuba namhlanje sizokubonisa eyona nto ilunge kakhulu izakhelo kwi-Instagram onokuzisebenzisa ukwenza iifoto zakho zonke ukuba zime kwaye zahluke ngokupheleleyo kwenye.
Zeziphi izibonelelo zokusebenzisa iifreyimu kwi-Instagram?
Iifoto ziya kubonakala zininzi zodwa ngaphandle, xa uyisebenzisa kwindawo nganye yeposi yakho iya kubonakala intle kakhulu kwaye yahlukile kwabanye abasebenzisi.
Njengoko uza kube usebenzisa isakhelo akuyi kuba yimfuneko ukuba usike ifoto, kuba ngokwesiqhelo xa usebenzisa iifreyimu iifoto zilingana nobungakanani befoto.
Inani lokukhethwa, uyilo nokubekwa onalo kwizakhelo kuya kwenza yonke into ibonakale ngcono kwaye inokuba luhlobo lwesitampu kwiprofayile yakho.
Unganomdla wokwazi ukuba zeziphi amabinzana amahle e-Instagram.
Sebenzisa ezi zicelo ukuba ube nezakhelo kwi-Instagram
Sisicelo sokuba okwangoku ifumaneka kuphela kubasebenzisi abane-iOSkuyasebenza ukubeka iifreyimu kwiifoto. Unokukhetha ubungakanani obufunayo, umbala ozenzele umfanekiso. Ifoto iya kulunga ngokugqibeleleyo ngaphandle kokuphulukana nomlinganiso wayo wokuqala okanye ukuyinqanda.
Ezi ziimpawu ezinolu hlelo lokusebenza:
Izinto ezahlukeneyo zokucoca
Faka umbala ngokhetho
Umgca, isicatshulwa kunye nomhleli we-emoji
Unxibelelwano lokwabelana nge-Instagram kunye nezinye iinethiwekhi zentlalo
Ukwazi ukutyala kunye nokujikeleza umfanekiso
Esi sisicelo apho ungabelana khona nge-Instagram kunye nezinye iinethiwekhi zentlalo nganye kwifoto oyifunayo. Akukho mfuneko yokuba bancothulwe kuba umda usebenza njengesakhelo esihle ngasinye sazo.
Inazo ezi mpawu kubasebenzisi bayo:
Yenza ikholaji ngemifanekiso oyifunayo kunye nayo Yongeza ibinzana lothando.
Inezinto ezahlukeneyo zokuhluzwa kunye neziphumo zeefoto
Ekuqaleni, le app yayenzelwe i-iOS kuphela, kodwa okwangoku inombhalo wayo we-Android kwaye ikhululekile ngokuphelele. Uyilo lwayo luthambile ngakumbi kwaye alunamilinganiselo mincinci, kodwa ke loo nto ayithathi mandla anika imbonakalo entle kwimifanekiso nganye. Ke unokuphucula Instagram marketing.
La ngamanqaku ongezelelweyo kwesi sicelo:
Ukudibanisa isicatshulwa kunye nezitikha
Sebenza kwimialeko eneefoto
Yongeza izithunzi kunye neziphumo
Sisicelo sasimahla eyenzelwe zombini inkqubo ye-iOS kunye nenkqubo ye-Android. Njengakwezinye izicelo ungasebenzisa oku ukupapasha nayiphi na ifoto ngaphandle kokuyinqanda.
Eminye imisebenzi enayo le sicelo yile ilandelayo:
Ukuhlanganisa izicatshulwa, izitikha kunye nomculo
Zininzi izicelo ezihlawulelweyo ongasisebenzisa ukongeza iifreyimu, ezi zezona ziwayo:
Sisicelo apho ungasebenzisa ikholaji enemida eyahlukeneyo, imilo kunye noyilo olufunayo. Ixabiso layo lilungile kakhulu kwaye kunjalo ziyafumaneka zombini i-Android kunye ne-iOS.
Sisicelo esimnandi kakhulu apho abasebenzisi be-iPhone kunye ne-Android banokwenza ikholaji ene-sensor apho ushukumisa ifowuni iifoto zibekwe ngokungacwangciswanga.
Ngenye yesicelo esinemisebenzi emininzi njengokubeka iifilitha, ukusika kunye nokuhlela iifoto, ukulungiswa kweliso elibomvu, ukubeka iifreyimu kunye Yongeza naluphi na uhlobo lwesicatshulwa, izitikha kunye nemizobo.
Yeyona App ilunge kakhulu apho ungongeza khona naluphi na uhlobo lweefoto kwaye ubanike umnwe oya kubenza babonakale ngcono. Ikwanayo nenketho ekhethekileyo "yemagazini" apho unokugcina khona ubomi bakho bemihla ngemihla kanye njengokuba wawungumntu odumileyo. Kubandakanya iintlobo zezincamathelisi ezinokufakwa kwimifanekiso nganye.
Inokwazi ukubeka ifoto esiyifunayo kumzobo wejometri, eya kunceda iprofayile yakho ukuba ibe noyilo olwahlukileyo oluya kunika uthinte kakhulu kwiakhawunti yakho.
Ngoku uyazi zonke ezi zicelo ezilungileyo ezinokukunceda ukuphucula iifoto zakho zeakhawunti, ungazama ukukhuphela enye yezi zicelo kwaye ukhethe ezona zilungele iimfuno zakho zomxholo. Sinethemba lokuba wena kunye nabalandeli bakho niyonwabele ezi uyilo.
Unokongeza isakhelo kwifoto yakho ibinzana elimnandi lokuphumelela.
1 Zeziphi izibonelelo zokusebenzisa iifreyimu kwi-Instagram?
2 Sebenzisa ezi zicelo ukuba ube nezakhelo kwi-Instagram
NgoJanuwari 27, 2019
Leliphi elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-Instagram kwi-2018?
Ungakuphucula njani ukugcwala kwiwebhu ngokukhawuleza